MP3 Ntụgharị - Olee otú iji tọghata Audio ma wepụ Video ka MP3
Chọrọ iji tọghata audio na WMA, M4A, WAV, AAC, AC3, OGG wdg na-MP3; otu aka ahụ?
Chọrọ wepụ ndị mara mma n'okirikiri si a nkiri?
Chọrọ bulite MP3 ma ọ bụ a CD ka WMV, nke mere na ọ nwere ike uploaded YouTube ma ọ bụ Facebook, wdg?
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji nweta ndị dị n'elu, ihe niile ị chọrọ bụ nnọọ a MP3 Ntụgharị. Isiokwu a ga-agwa gị ụfọdụ oké MP3 converters. Dị na-agụ site isiokwu iji nweta ya.
Nweta Best & Professional MP3 Ntụgharị
Tọghata ọdịyo na MP3. The MP3 audio Ntụgharị-enye gị ohere ọsọ ọsọ na mfe tọghata ọ bụla ọzọ ọdịyo faịlụ na WMA, M4A, M4V, AAC / AC3, OGG wdg na-MP3 audios;
Wepụ MP3 si Video. Ị nwere ike wepụ MP3 faịlụ site n'akụkụ ọ bụla nke gị nkiri na video faịlụ; Dị nnọọ tọghata video na AVI, MP4, WMV, MKV, Flv, VOB, 3GP / 3G2, MOV na na na-MP3 ọdịyo faịlụ
Tọghata MP3 ka WMV (AVI, MKV, MP4, MOV, wdg). Tọghata MP3 ma ọ bụ ndị ọzọ na audio formats ka WMV, AVI, MKV, MP4, MOV, na ndị ọzọ, nke mere na ị nwere ike bulite MP3 ka Facebook, YouTube ma ọ bụ ndị ọzọ video nkekọrịta saịtị.
Cheta na: Nke a MP3 Ntụgharị nwekwara ike na-arụ ọrụ dị ka a ọkachamara video Ntụgharị, video nchịkọta akụkọ ma video Downloader. Ị nwere ike iji ya ogbe tọghata videos ọ bụla usoro na presets, dezie vidiyo site trimming, cropping, merging ma ọ bụ na-agbakwunye mmetụta. Ọbụna ị nwere ike ibudata online videos na ya.
Part 1: Olee-eji nke a MP3 Ntụgharị
Part 2: Free MP3 Ntụgharị
1. Import video ọ bụ ọdịyo faịlụ a MP3 Ntụgharị
Mepee nchekwa ebe gị video ọ bụ ọdịyo faịlụ-echekwara na kọmputa. Mgbe ahụ, kpọmkwem ịdọrọ video ma ọ bụ ọdịyo faịlụ ka a na ngwa ekpe ebi ndụ. Nke a MP3 Ntụgharị akwado fọrọ nke nta ọ bụla video na ọdịyo. Ị nwere ike iji ya iji tọghata video ma ọ bụ ọdịyo na MP3, ma ọ bụ MP3 ka video formats, dị ka MP3 ka WMV.
2. Họrọ mmepụta format
Tọghata faịlụ ka MP3: Pịa format na akara ngosi na "mmepụta Format" ebi ndụ, na mgbe ahụ na mmapụta format window, na-aga "usoro"> "Audio"> "MP3".
Tọghata MP3 ka WMV (AVI, MKV, MP4, MOV, wdg): Ke "mmepụta Format" ebi ndụ, dị nnọọ na-aga "usoro"> "Video". wee họrọ mmepụta video format ị chọrọ.
Cheta na: Mgbe ala nke a na ngwa si ​​interface, e nwere mmepụta faịlụ ụzọ. Ọ bụrụ na ị na-eme adịghị afọ ojuju na ndabere ụzọ, dị nnọọ pịa "..." button n'azụ iji họrọ mmepụta faịlụ ụzọ site onwe gị.
3. Malite MP3 akakabarede
See "tọghata" button na ala nri nke a MP3 Video Ntụgharị 's interface iji tọghata ndị ọzọ ọdịyo faịlụ ka MP3, ma ọ bụ wepụ MP3 music si video faịlụ, ma ọ tọghata MP3 ka WMV (MKV, MP4, MOV, wdg) maka ebugote MP3 ka video nkekọrịta saịtị. Mgbe akakabarede-agwụ agwụ, ị dị nnọọ kpọmkwem pịa "Open nchekwa" ngwa ngwa-ahụ ndị a tọghatara MP3 faịlụ.
# 1. Free Video Ntụgharị: Wondershare Free MP3 Ntụgharị
Nke a free MP3 video Ntụgharị akwado converting media faịlụ ka video, ọdịyo ma ọ bụ iPhone, iPad na ndị ọzọ na Android ngwaọrụ. Ị pụrụ nanị mbubata gị video ma ọ bụ ọdịyo a MP3 Ntụgharị na ahụ setịpụrụ mmepụta format, na mgbe ahụ na-amalite iji tọghata.
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ iji tọghata media faịlụ ka MP3 ma ọ bụ tọghata MP3 ndị ọzọ nkịtị media formats. Nke a free MP3 Ntụgharị nwere ike ịbụ gị ezi nhọrọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eche banyere video mmepụta àgwà na akakabarede ọsọ, ị ga-mma na-agbalị Video Converter Ultimate.
Olee otú mbubata MP3 ka Final Cut Pro on Mac OS X (Yosemite gụnyere)
Olee otú iji tọghata WMV ka VOB na Windows ma ọ bụ Mac OS X Odum
Olee otú iji tọghata mpg ka FLV na Windows na Mac (Yosemite gụnyere)
> Resource> tọghata> tọghata Audio ma wepụ MP3 si Video na MP3 Ntụgharị